Sida Loo Sameeyo Hagaha Qaabka Sheekooyinka Sheekooyinka Instgram (iyo Waxa Lagu Daro) | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida loo sameeyo Hagaha Qaabka Sheekooyinka Instagram (iyo waxa lagu daro)
Si kasta oo aad ugu heellan tahay socodsiinta akoontada Instagram ee shirkaddaada, ma joogi kartid mar kasta. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay fasax had iyo jeer!
Marka xubin kooxeed kale ay tahay inuu majaraha qabto, hagaha qaabka Sheekooyinka Instagram ayaa ka caawin doona inuu u dejiyo guusha isagoo daboolaya wax kasta oo ay u baahan yihiin inay ogaadaan. Akhri si aad u ogaato:
Sababaha kale ee laga yaabo inaad u baahato si aad u abuurto hagaha qaabka Sheekooyinka Instagram
Wax kasta oo ay tahay inaad ku darto hagaha qaabka Sheekooyinkaaga Instagram
Bonus: Soo deji qaab bilaash ah qaabka Sheekooyinka Instagram taasi waxay kaa caawin doontaa inaad ilaaliso muuqaalka iyo dareenka joogtada ah ee kanaalkaaga oo aad noqoto isha keliya ee runta kooxdaada.
Waa maxay sababta aad ugu baahan tahay hagaha qaabka Sheekooyinkaaga Instagram
Waxaad u baahan tahay hagaha qaabka Sheekooyinka Instagram isla sababta aad ugu baahan tahay hage qaab kanaalada kale ee warbaahinta bulshada. Waxay kaa caawin doontaa inaad ilaaliso muuqaalka iyo dareenka Sheekooyinkaaga, taas oo xoojinaysa astaantaada iyo sidoo kale xiriirka aad la leedahay kuwa raacsan.
Intaa waxaa dheer, waxay siin doontaa asxaabtaada kalsooni marka ay u baahan yihiin inay kor u qaadaan saxanka, si ay diiradda u saaraan abuurista Sheekooyin waaweyn halkii ay ka walwali lahaayeen inay isticmaalayaan xarfo khaldan ama hashtag.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waa kan waxa hagahaaga qaabku dabooli doono.
10 shay oo ay tahay in lagu daro hagahaaga qaabka Sheekooyinka Instagram
Haddii aad doorbidayso mid ka mid ah shanta xarfo ee caadiga ah ee Sheekooyinka Instagram (classic, modern, neon, typewriter or strong), ama aad isticmaasho app dhinac saddexaad ah sida HypeType si aad u balaariso fursadahaaga, fartaadu wax badan ayay adiga kaa sheegaysaa.
Sida naqshadeeye Sarah Hyndman ay u heshay, xarfaha ayaa u gudbiya shaqsiyada summadaada iyo dabeecadda daawadayaasha. Isticmaalka far ka duwan waxay bedeli doontaa dhawaaqa Sheekooyinkaaga, sida haddii ay si lama filaan ah u bilaabeen inay ku hadlaan lahjaddaas yaabka leh ee Ingiriiska ee Madonna.
Markaa meel kasta oo fartaadu ka timaaddo, iska hubi inaad ku darto hagaha qaabkaaga. Sheeg cabbirada iyo miisaanka, iyo wixii ka reeban ama xaalado gaar ah. Haddii aad u isticmaasho dhammaan koofiyadaha cinwaannada, ama aad door bidayso inaad ku dhegganaato muuqaal-dhammaan-hoosaad caadi ah, iska hubi inaad sheegto.
2. Liiska hashtagyada la ansixiyay
Ku darista hashtagga Sheekooyinkaaga Instagram waxay ka caawin kartaa inay gaaraan dhegaystayaal ballaaran. Laakiin sidoo kale way kugu shaqayn karaan haddii aad si lama filaan ah u qorto wax laga xishoodo ama furaha ka baxsan.
U dhaaf asxaabtaada (iyo astaantaada!) ceebta leh liis dhamaystiran oo hashtag ah. Kuwan waa inay ku jiraan hashtagyada summadaysan (kuwa gaarka u ah shirkaddaada ama ololayaasha, sida Warby Parker's #WarbyHomeTryOn), iyo sidoo kale hashtag kasta oo kale oo la oggolaaday oo aad si joogto ah u isticmaasho iyo goorta lagu daro.
Ha ka fikirin sida xubnaha kale ee kooxda ay u yaqaaniin Instagram-ga gacanta gaaban. Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in qof kastaa garanayo micnaha #TBT, laakiin ma dhaawacayso in la caddeeyo.
3. Liiska GIF-yada la ansixiyay
Waxaan rajeynayaa inaad ku isticmaalayso GIF-yada, luqadda guud ee intarneedka, ee Sheekooyinkaaga Instragram. Ku dhawaad ​​ma jiraan qoraallo aan lagu hagaajin karin marka lagu daro qoob ka ciyaarka Tina Belcher. Haddii aad tahay, waa inaad ku dartaa hagahaaga qaabka!
Haddi aad adigu samaysato ama aad ku jiidato qaar aad ugu cadcad GIPHY, hagaha qaabkaagu waa in uu daboolaa GIFS iyo isticmaalkooda.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in marka aad ku darto xiriiriye Sheekooyinkaaga Instagram, waxaad had iyo jeer ku dartaa "kor u mari" gaar ah ama "wax badan ka sii akhri" GIF. Waxay ku caawin kartaa halkan in lagu daro sawirada sawirada ama faylasha sawirada.
Faahfaahintani waa yar yihiin, laakiin waxay sameeyaan dhammaan faraqa u samaynta sheeko ku habboon kuwa raacsan.
4. Ilaha sawirka iyo tilmaamaha
Sida kafeegu u yahay qaybta ugu muhiimsan ee subaxdaada, muuqaaladu waa qaybta ugu muhiimsan ee istiraatiijiyaddaada Instagram.
Faahfaahinta ku dhaaf meelaha laga helo sawirada la oggolaaday, sida goobaha sawirada saamiyada ee aad doorbidayso ama akoonnada xusuus-qorka, iyo faylalka la wadaago ee hantida alaabtaada ama ololahaaga.
Haddii ay dhacdo in asxaabtaada ay u baahan yihiin inay sawirro toos ah iyo fiidiyowyo ka qaadaan Sheekadooda Instagram, waxay sidoo kale ku caawin kartaa bixinta tilmaamo ku saabsan hababka ugu wanaagsan ee sawirka.
Nasiib wanaag adiga, waxaan kuu haynaa tilmaamo ku saabsan qaadashada sawirro wanaagsan! Laakiin sidoo kale waa inaad ku dartaa filtarrada caadiga ah ama wax ka beddelka ee aad sameyso si aad u ilaaliso sawiradaada sumadda, si aad u bixiso hagida tafatirka sawirka sidoo kale.
Midabku waa furaha aqoonsiga summadaada. Isticmaalka midabka si joogto ah Sheekooyinkaaga ayaa kaa caawin doona in la dhiso aqoonsiga sumadda iyo in la dhiso qaab gaar ah. Kaliya ka fikir Starbucks iyo saxiixooda cagaaran:
Hagaha qaabka Sheekooyinkaaga Instagram waa in ay ku jiraan liiska midabada summadaada, oo ay ku jiraan halka iyo goorta aad isticmaasho. Ku dar palette kaaga aasaasiga ah (midabada summadaada iyo baakadaha, tusaale ahaan, kuwaas oo si xooggan ula xiriira astaantaada), iyo sidoo kale midabada sare. Midabada sare waxay noqon karaan kuwo dhexdhexaad ah ama hoos loo dhigo, laakiin waa inay buuxiyaan palette kaaga aasaasiga ah.
Ku dar kood HEX gaar ah iyo qiimayaasha RGB ee abuurayaasha tusmada kuwaas oo laga yaabo inay sawiraan naqshadeeyaan ama ku shaqaynaya qaab-dhismeedka (wax badan kuwan hoose).
6. Apps iyo qalabyada
Maxaad u isticmaashaa si aad Sheekooyinkaaga uga dhigto kuwo la yaab leh?
Haddi ay tahay VSCO ee kor loogu qaadayo fiidyahaaga iyo sawiradaada ama Habsamida Nolosha ee Sheekooyinka qaabka dhaqdhaqaaqa joogsiga ah, hagaha qaabkaaga waa in lagu daro agabkan!
Ku dar wax kasta oo horudhac ah ama u tag filtarrada iyo dejinta, si asxaabtaada ay u cidi karaan muuqaalka iyo dareenka Sheekooyinkaaga Instagram.
7. Qaababka Sheekooyinka Instagram
Soo jeedinta abka gaarka ah waxay gacan ka geysan doontaa in la gaaro muuqaalka sumadda leh iyo dareenka Sheekooyinkaaga Instagram-ka, laakiin bixinta qaab-dhismeedka waxay xaqiijin doontaa toosinta saxda ah.
Haddii aad leedahay xubno badan oo koox ah oo soo geliya Sheekooyinka Instagram, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho qaab-dhismeedka si aad u abuurto waxyaabo dhalaalaya oo joogto ah (ka bilow qaababkayada bilaashka ah).
Waxaa jira barnaamijyo badan oo loogu talagalay abuurista qaabab Sheeko. Qaar ka mid ah kuwa aan ugu jecelnahay waxaa ka mid ah Adobe Spark iyo Unfold, kaas oo uu adeegsaday Tommy Hilfiger si uu u sameeyo Sheekadan:
Ku dar faahfaahinta galitaanka koontadaada hagaha qaabkaaga, si asxaabtaada ay u helaan jaantusyada aad si joogto ah u isticmaasho.
Bixi habraacyada isticmaalka template kasta. Tusaale ahaan, haddii aad u isticmaasho qaab-dhismeedka gaarka ah ee Sheekooyinka ku saabsan qoraallada cusub ee blog, ku qor hagahaaga!
8. Kalandarka nuxurka
Waxaa laga yaabaa inaad u kacdo qaab kedis ah Sheekooyinka Instagram, adoo qabsanaya wax kasta oo kugu dhiirigeliya maalin kasta. Waxaan xushmeynaa habka ruuxa xorta ah!
Laakiin waxay u badan tahay, inaad isticmaasho jadwalka qoraalka warbaahinta bulshada si aad u qorsheysato qoraaladaada. Tani waa macluumaad qiimo leh haddii qof cusub uu ilaalinayo Sheekooyinkaaga Instagram waqti dheer!
Jadwalka macluumaadku waa inuu ku jiraa nuxurka muuqda ee kanaaladaada oo dhan, sida soo saarista alaabta iyo munaasabadaha gaarka ah. Laakiin sidoo kale waa inay lahaataa talooyin ku saabsan astaamo kasta oo soo noqnoqda ama qorshaysan ee Sheekada Instagram.
Haddii aad ku darto macluumaadka caadiga ah ee Sheeko maalmo gaar ah (sida Salaasada Daah-furnaanta Everlane ama Cunto karinta Asal ahaan Arbacada Q+As), hubi inaad haysatid tafaasiishaas lagu sheegay jadwalka macluumaadkaaga.
9. Fikradaha ka kooban Evergreen
Haddii aad haysato ama aanad haysan jadwal u samaynayo macluumaadkaaga maalin-maalin-maalin (ama toddobaad-todoba-todobaad), waxa ay ku caawin kartaa in lagu daro hagaha waxa ku jira astaantaada weligood cagaarka ah.
Mawduuca Evergreen waxa loola jeedaa qoraalada had iyo jeer khuseeya dhagaystayaashaada. Waxaa dib loo soo celin karaa si loo buuxiyo daldaloolada jadwalkaaga dhejinta, ama haddii aad sawir maran ka samaynayso waxaad wadaagayso.
Kuwani waxay noqon karaan "ugu wanagsan" qoraalladaada blogka, waraysiyadaada ugu caansan, iyo sawirada iyo fiidyaha helay hawlgelinta ugu sareysa. Waxa kale oo aad halkan ku soo jeedin kartaa nuxurka isticmaaluhu soo saaray, sida qoraalada ka soo baxa saamaynta leh ee sita alaabtaada.
Hagahaaga qaabku waa inuu ku jiraa talooyin iyo xidhiidhiyo halkan hagitaan, iyo sidoo kale talooyinka ku saabsan noocyada Sheekooyinka sida ugu wanaagsan ula shaqeeya dhagaystayaashaada. Haddii aad ogtahay kuwa raacsan inay had iyo jeer jecel yihiin Sheeko ku saabsan cunugga ugu quruxda badan ee xafiiskaaga, taasi waa caqli wanaagsan oo lagu daro!
Habkaas, haddii saaxiibkaagii aanu hubin waxa la soo dhejiyo, waxay heli doonaan fikrado adag oo ay ka soo qaataan.
10. Waqtiyada dhajinta iyo soo noqnoqda
Ma jiraan hab-dhaqanno ugu wanaagsan inta jeer ee lagu dhejiyo Sheekooyinka Instagram, ama wakhtigee ayaad ku dhejin kartaa (sida ka duwan qoraallada quudinta, ama kanaalada kale ee warbaahinta bulshada!) Furaha guusha ma aha tiro sixir ah sheekooyin maalintii. - waa joogtayn.
Adiga, taasi waxay la macno tahay inaad soo dhejiso dhawr sheeko maalin kasta, ama inaad haysato dhawr maalmood usbuuc kasta oo aad soo dhejiso nuxurka. Haddii aad la socoto falanqaynta Sheekooyinkaaga, waxaad ogaan doontaa waxa ugu fiican dhagaystayaashaada!
Wax kasta oo aad sameyso, ku rid hagahaaga qaabka. Haddii aad sida caadiga ah dhajiso saddex Sheeko maalin kasta, waxay u ekaan doontaa wax la yaab leh taageerayaashaada haddii saaxiib aad u xiiso badan uu soo dhejiyo 25 hal mar.
Markaad isu keento hagaha qaabkaaga, waxaad si kalsooni leh uga nasan kartaa astaanta astaantaada Instagram.
Waxay qaadan kartaa dadaal yar in la isku keeno, laakiin waxay badbaadin doontaa kooxdaada waqti aad u badan oo ay ka welweli doonto wadada! Tan ugu muhiimsan, waxay kuu ogolaan doontaa dhammaan inaad ku raaxaysato habka abuurista iyo wadaagista Sheekooyinka waaweyn dhagaystayaashaada.
Maamul joogitaankaaga Instagram oo ay weheliso kanaaladaada kale ee bulshada oo wakhti badbaadi adigoo isticmaalaya Hootsuite. Hal dashboard waxaad ka jadwalaysan kartaa oo daabici kartaa qoraallada, ka qaybgeli kartaa dhagaystayaasha, oo waxaad cabbiri kartaa waxqabadka. Isku day bilaash maanta.
Hagaha Bilowga: Sida Loo Isticmaalo Mailchimp (Dhiso Liiskaaga iimaylka)